क्यान्सरको उपचारमा व्यस्त डा. साह :: Janaknandani.com
संवाददाता December 31, 2021 27 जनाले पढ़िसके
न्युजडेस्क/जनकपुरधाम, पौष १६ गते
अमेरिकाका ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विनय साह क्यान्सर रोगीहरुको उपचारमा व्यस्त भएका छन् । अमेरिकावाट सोमवार जनकपुरधाम पुगेका डा. साहले यहाँ स्थित विनय तारा क्यान्सर सेन्टरमा विरामीहरुको चेकजाँच गरि रहेका छन् ।
उनी समय–समयमा अमेरिकावाट जनकपुरधाम आएर यहाँका क्यान्सर रोगीहरुको उपचार गर्दै आई रहेका छन् । उनले त्यहाँका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको टोली यहाँ ल्याई यहाँका रोगीहरुको उपचारमा समेत सहयोग गर्दै आई रहेका छन् । उनले यहाँवाट क्यान्सर रोगीहरु बाहिर उपचार गराउन जाँदा धेरैनै महगो पर्ने भएकाले हामीहरु यहाँ आएरनै उपचार गर्ने गरेको बताए ।
प्रदेश २ तथा भारतका विहार, उत्तरप्रदेश लगायतका स्थानहरुको विरामीहरु समेत यहाँ आउने र सहज उपचार गराउन सक्ने सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुँदा हुदै बाहिर जाने विरामीहरु अव यहाँनै उपचार गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यहाँका रोगीहरु बाहिर जाँदा समयका साथै बढि खर्च आउने भएका कारण विनयतारा क्यान्सर सेन्टर स्थापना गरिएको उनको भनाई छ ।
विनयतारा क्यान्सर सेन्टरले विगत देखिनै यहाँका क्यान्सर रोगीहरुलाई अत्याधुनिक मेसिनहरुद्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञहरुवाट रोगीहरुको उपचार गराउँदै आएको छ । विनयतारा क्यान्सर सेन्टरलाई २ सय वेडको अस्पतालको रुपमा विस्तार समेत छिट्टै गरिने डा. साहले जानकारी दिए ।